फुटबल कोचले आफ्नो घरमा आश्रय दिएको विद्यार्थीसंग नै कोचकी श्रीमती सल्केपछि भयो यो हदसम्म !
Posted on January 9, 2019 by T NP
वाशिङटन, २५ पुस । आश्रय दिइएकै व्यक्तिबाट आफ्नो घर तहस नहस हुन्छ भन्ने कसलाई के थाहा ? यदि थाहा हुँदो हो त कसैले त्यस्तो रिस्क लिंदैनथ्यो होला ।
सन् २०१४ मा अमेरीकाको वाशिङटनमा यस्तै एउटा घटना घटेको थियो । टेनेसी हाइस्कुलका फुटबल कोच जस्टिन म्याककार्टरले केही समय अगाडि आफ्ना २ विद्यार्थीलाई आफूसँगै बस्नको लागि आफ्नो घर बोलाए । त्यतिबेला उनलाई थाहा थिएन कि उनको यो फैसला कतिसम्म गलत थियो । विद्यार्थीहरु घर आएपछि तीमध्येका एकसँग कोचकी पत्नीको नाजायज सम्बन्ध सुरु भयो । उनीहरुले कैयौं पटक शारीरिक सम्बन्ध पनि बनाए ।
ती २ जना विद्यार्थी दाजुभाइ थिए र एकल महिलाका सन्तान थिए । आर्थिक समस्याका कारण उनीहरु आमासँग नबसी कोचकहाँ बस्न आएका थिए । कोचकहाँ बस्ने क्रममा ६ वर्षका भाइको कोचकी पत्नी केल्सीसँग अवैध सम्बन्ध सुरु भयो ।
२०१५ को अगस्टमा यी दाजुभाइ कोचको घर छाडेर गए । तर २ महिनापछि पुनः केल्सीले आफ्ना पतिलाई मनाउँदै ती दुईलाई पुनः आफ्नै घरमा राख्न राजी गराइन् । त्यसपछि ती दुई पुनः कोचकै घरमा बस्न थाले । यसको केही समयपछि ती नाबालिग किशोरले केल्सीको एउटा नग्न फोटो सामाजिक संजालमा सेयर गरिदिए । त्यसपछि उनीहरुको अफेयरको कुरा खुल्यो र बाल सुरक्षा एजेन्सी र पुलिसले जाँच सुरु गर्यो ।
घटना सार्वजनिक भएपछि जस्टिनले कोचको पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । जाँचमा किशोरले महिलामाथि यौन शोषणको आरोप लगाए । उनले लगातार यौन शोषणका कारण आफूले धेरै समस्या भोग्नु परेको बताए । त्यसपछि महिलालाई पक्राउ गरियो ।
महिलाले भने आफूहरुबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको भन्दै आफूले यौन शोषण नगरेको बताएकी थिइन् । हालै अदालतले महिलालाई ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।
आज काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम ४ दशमलव ५ डिग्री !